Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Xuququl Insanka Ogadenya ee Loogu Magacdaray “Xasuqii Ogadenya ee la,iska Indha Tiray” oo sifican uga qabsomay Minnesota
Shirkii Xuququl Insanka Ogadenya ee Loogu Magacdaray “Xasuqii Ogadenya ee la,iska Indha Tiray” oo sifican uga qabsomay Minnesota
Jimco, 29 November 2013- Maanta waxaa Minneapolis lagu qabtay shir muhim ah oo lagaga hadlayay tacadiyada ay gumaysiga Ethiopia u gaysato shacabka Ogadenya. Shirkan oo in muda ahba la sugayay ayaa waxaa siwayan usoo qabanqabiyay Jaliyada “Ogaden American Community”.
Shirkan waxaa kasooqaybgalay Siyasiyiin magac iyo martababa ku dhexleh wadankan maraykanak, Siyasiyiin iyo aqoonyahamiin udhashay dalka Ogadenya iyo qaybaha kaladuwan ee ay ka koobantahay bulshada Ogadenya. Balase waxaa si gaar ah umudan in laxuso, in uu shirkan ka soo qaybgalay joornaliistaha caanka ah ee lagumagacabo Jonathan Alpayrie oo isagu ahaa martisharafta shirka. Jonatahan waxaa uu sanadkii 2006 iyo 2009 uu si dhumasha ah ku galay gudaha Ogadenya waxa una si dhumasha ah Ethiopia uga soo baxay isaga oo wata xog culus oo ku saabsan dibatada ay gumaysiga Ethiopia ku hayaan shacabka Ogadenya iyo Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya.
Shirkan waxaa ka hadlay aqoonyahamiin iyo siyasiyiin farabadan. waxayna si qotadheer ugunuux nuxsadeen una soo bandhigeen tacadiyada loogaysto shacabka Ogadenya ee dulman oo maqal iyo muuqaalba isugu jira.
Ayadoo dhamanba xogtii shirkan lagu soo bandhigay ay kamuuqatay dhibato iyo murugo haysata shacabka Ogadenya ayaa waxa kasoo qaybgalayaashii shirka siwayn usoojiitay warbixinadii iyo cadaymihii muuqaalka ahaa ee uu soobandhigay wariye Jonathan Alpayrie. Wariye Jonathan waxaa uu cadeeyay in dhibatada Ogadenya ka jirta aysan jirin waxa uu ku qiyasi karo runtiina ay yaab iyo amkaag kunoqotay in ay jiranan qarnigan 21 dad ku nool dhibaato iyo qumaysi baxadasleh.
Wariye, Jonathan xogta uu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa:-
1- Gabdhoo udhashay Ogadenyaa oo jelasha lagu faraxumeeyay kadibna intay soo baxsadeen ku biiray cidamada qalabka sida ee JWXO.
2- Shacab laga barakiciyay deegankii ay kunolayeen oo ay cidamada Ethiopia ku amreen inay ka guuraan degandii ay daganayeen sabab laan.
3- Magalooyin ay ciidamaga gumaysiga Ethiopia ay gabi ahanba gubeen.
4- Xabaal wadareed ay ku jiraan dad kor u dhafaya ilaa 1500 boqol oo ruux oo shacaka Ogadenya ah oo ay laayeen cidamada Ogadenya kadibna ay isku dayeen inay qariyaan maydadkooda ayagoo ku guray godad qwaawayn.
5- Macaluul iyo baahi badan oo haysata shacaka Ogadenya.
6- Daryeel laan cafimaad, mid waxbarasho, mid nabangalyo, mid dhaqaale iyo mid xornimo laan oo haysata shacabka Ogadenya.
7- waxaa uu muqal ahaan wariyuhu kusoo bandhigay cududa ciidan ee JWXO ee ka howlgasha gudaha Ogadenya.
dhibaatooyonka uu soo bandhigay wariye Jonathan iyo dadkii kale e madasha kahadlay ayaan runtii ahayd mid aad u fara badan oo ayna suurtagala ahayn inaan qoralkan ku soo koobno.
Jawaiga shirka ayaa gabi ahaanba waxaad ka dareemaysay dhiilo iyo murugo joogta ah, ayadoo warbixinada iyo xogta lasoo bandhigay ay dhamanba xanbarsanayeen tacadiyo, tas ayana sababtay inay ka soo qaybgalayashii shirku ay fursad uwayan ay ku farxanba ama ay ku qoslan.
Isku soo wada duuboo, shirkani waxaa uu ahaa shir xuququl insaan oo tarikhi ah, marka laga eego martisharafta shirka ka soo qaybqashay, xoqta shirka lagu soo bandhigay, sida loo agasimay iyo waliba sida looga soo qayb galay oo runtii ahayd mid madashii shirka lasoo buxdhafiyay ayadoo ay cimilada hawadu aad u qaboobayd.